ငြိမ်းဝေ: August 2008
Posted by ငြိမ်းဝေ at 8:02 PM No comments:
Posted by ငြိမ်းဝေ at 9:10 PM2comments:
Posted by ငြိမ်းဝေ at 11:36 PM3comments:
ယွန်းစလင်းချောင်း၊ မာနယ်ပလော၊အော်စလိုနှင့် ဟိုက္ကူကဗျာထဲက လရောင်များ
ဟိုက္ကူကဗျာနဲ့ကျနော် မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့မိတာ နည်းနည်းတော့ကြာပါပြီ။
ကဗျာဆရာအောင်ဇင်မင်းက ဟိုက္ကူကဗျာတချို့ကို အရက်မူးမူးနဲ့ရွတ်ပြ။ ဒီတုန်းက ကျနော်က ကဗျာတွေကို သွေးတိုးစမ်းပြီးရေးကာစ။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်ဝန်းကျင် ... ပဲခူး။ သည့်နောက်ပိုင်း ဟိုက္ကူကဗျာနဲ့ကျနော် ထုံ့ပိုင်းထုံ့ပိုင်းသာ တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့။
မှတ်မှတ်ရရ ... ၁၉၉၃ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တော်လှန်ရေးတာဝန်နဲ့ ရှေ့တန်းကိုခရီးထွက်ရင်း ဂျပန်အမျိုးသားနှစ် ယောက်နဲ့တွေ့တော့မှ ဟိုက္ကူကဗျာကို ကျနော်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားခဲ့၊ ပိုပြီးခုံမင်စုံမက် လာခဲ့တာပါ။ ဒီတုန်းက တွေ့ဦးစမှာ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ကျနော်နဲ့ခတ်စိမ်းစိမ်းလို့ထင်ရပါတယ်။ သူတို့ကလည်း သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ လျှို့ဝှက်ခရီးသွားကြတာပါ။ ကျနော်က ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့တုန်း ဟိုက္ကူကဗျာတွေအကြောင်းမေးချင်တာ ဘယ်လိုမှမျိုသိပ်မထားနိုင်တဲ့အဆုံး စကားနည်းနည်း ဟကြည့်လိုက်တော့မှ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ဟိုက္ကူကဗျာတွေအကြောင်း ပြောလည်းပြော၊ ရွတ်လည်းရွတ်ပြ။ အထူးသဖြင့် သူတို့က လရောင်တွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကိုပဲ ရွေးပြီးရွတ်ပြခဲ့ကြလို့ ကျနော့်မှာ ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဟိုက္ကူကဗျာမှာ ကာရန်မပါတဲ့အကြောင်း၊ ရာသီပြစကားလုံးပါလေ့ ပါထရှိတဲ့အကြောင်း သိခွင့်ရတာလည်း အဲဒီအခါကြမှပါ။ ယွန်းစလင်းချောင်းကမ်း တဲတလုံးဘေးက ကောက်ရိုး ပုံကြီးပေါ်မှာ လရောင်ကိုမော့ကြည့်ရင်း ဟိုက္ကူကဗျာတွေအကြောင်း သူတို့နှစ်ဦးပြောပြသမျှ နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ ညတည ... ကျနော် ဘယ်လိုမှ မမေ့နိုင်ဘူး။
တခါ ...၊ ၁၉၉၅ ခု၊ တော်လှန်ရးဌာနချုပ် မာနယ်ပလောကျအပြီး ဥရောပမဲဇာမှာ သောင်တင်နေတဲ့အချိန်၊ ဟိုက္ကူကဗျာတွေနဲ့ဝေးရပြီအောက်မေ့တာ မိတ်ဆွေနော်ဝေအမျိုးသမီးတဦးဆီက ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် ဟိုက္ကူကဗျာစာအုပ် ကလေးတအုပ်ရလိုက်တော့ ဟိုက္ကူကဗျာတွေ ခြေတံ တော်တော်ရှည်ပါလားဆိုပြီး အံ့သြရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ နော်ဝေ မြန်မာ ကောင်စီဥက္ကဌမစ္စတာကူလွိုင်း (ကွယ်လွန်)ရဲ့ မြေအောက်ခန်းကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်ကို ချစ်ရဲဘော်ကြီးဒေါင်းညို (ကိုမောင် မောင်မြင့်)နဲ့အတူ ၀င်ကြည့်ခွင့်ကြုံတော့လည်း ဟိုက္ကူကဗျာစာအုပ်တချို့တွေ့ရပြန်ရော။ တခါ နော်ဝေကြက်ခြေနီ စခန်းတခုမှာ (၃)လခန့်သွားနေရတုန်း နော်ဝေပန်းချီဆရာမတဦးနဲ့ စကားလက်ဆုံကျတော့လည်း ဟိုက္ကူကဗျာတွေအကြောင်း ပြောသွားတာ ကြားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ အော်စလိုမြို့က စာကြည့်တိုက်တွေမှာလည်း ဟိုက္ကူကဗျာစာအုပ်တွေကို နော့်ခ်ျလို၊ အင်္ဂလိပ်လို တော်တော်များများတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုပြန်ဖို့ (၅)ရက်ခန့်အလို ပီရူးအမျိုးသား မိတ်ဆွေတဦးက ကျနော်ကဗျာဝါသနာ ပါမှန်းသိလို့ သူ့မှာရှိတဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာတချို့ကို မိတ္တူကူးပြီးပေးလိုက်ပြန်ပါသေးတယ်။ ကျနော် ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဟိုက္ကူကဗျာဟာ သူ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုိ ကျော်ပြီး ကမ္ဘာ့အနှံ့ခရီးဆန့်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သဘောကို ပြောချင်တာပါ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ အခုဆိုရင် ဟိုက္ကူကဗျာနဲ့ကျနော်ဟာ မိတ်ဆွေအဆင့်ကကျော်ခဲ့ရပြီဆိုပါတော့။
ဂျပန်ကဗျာမှာက အဓိကအားဖြင့် ကဗျာပုံသဏ္ဍာန်လမ်းကြောင်း သုံးမျိုးသုံးစားရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ရှေးအကျဆုံးက ‘တန်းခ’(Tanka) ဒါမှမဟုတ်‘၀ခ’(Waka)လို့ခေါ်တဲ့ ကဗျာပါ။ စာကြောင်းရေ ငါးကြောင်း(၅-၇-၅-၇-၇)စာလုံးရေ(၃၁)လုံးနဲ့ ဖွဲ့ရတဲ့ကဗျာ။ ဒီကဗျာစပ်နည်းကို ၈-ရာစုဦးပိုင်းမှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ၁၇-ရာစုအထိ အင်အားကောင်းခဲ့ပြီး အခု လက်ရှိ ကာလအထိလည်း စပ်ဆိုနေကြဆဲပါ။
၁၇-ရာစု၊ ‘တိုကူဂါဝါ’ခေတ်မှာ ဟိုက္ကူကဗျာစပ်နည်း ထွန်းကားလာပါတယ်။ ပထမ ‘ရမ်းဂ’(renga)လို့ ခေါ်တဲ့‘တန်းခ’ ထက် ပိုပြီးတိုတဲ့ ကဗျာစပ်နည်းပေါ်လာပါတယ်။ ဒီကဗျာက စာကြောင်းရေ(၂)ကြောင်း ဒါမှမဟုတ်(၃)ကြောင်းပဲရေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက တပုဒ်တည်းနဲ့မပြီးဘူး။ အဲဒီ(၂)ကြောင်းတပုဒ် ဒါမှမဟုတ်(၃)ကြောင်းတပုဒ်ကဗျာတွေကို ပုဒ်ရေကြိုက်သလောက် ဆက်ပြီးရေးလို့ရတဲ့ ကဗျာပါ။ အခံအအုပ် သဘောပြောရင်လည်း ရတဲ့နည်းပါ။ အများအားဖြင့် တယောက်က ရှေ့ကတပုဒ်စပ်ရင်၊ နောက်တယောက်က နောက် တပုဒ်ဆက်ပြီး၊ ဖြည့်ပြီးစပ်။ နောက်တယောက် ဒါမှမဟုတ် ပထမတပုဒ်စပ်ခဲ့သူက တခါထပ်ပြီး ဆက်ပြီးစပ်။ ဒီလိုနဲ့ တပုဒ်ပြီးတပုဒ် ဆက်ပြီးစပ်ရင်းက အရှည်ကြီးစပ်လို့ရတဲ့နည်းပေါ့။ ကျနော်တို့မြန်မာ ကဗျာမှာရှိတဲ့ အဖြည့်ခံရတုကို သတိရမိပါတယ်။ အညာကျေးလက်တချို့က အတိုင်အဖောက်နဲ့အချီအချ လက်တန်းစပ်ဆိုကြတဲ့ ကဗျာမျိုးလိုပေါ့။ ဒီ ‘ရမ်းဂ’ကဗျာကိုအခြေခံပြီးမှ (၃)ကြောင်း(၅-၇-၅)စာလုံးရေ (၁၇)လုံးနဲ့ဖွဲ့ရတဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာရေးနည်း ဆင့်ပွားပေါ်ပေါက်လာတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
နောက်တနည်းကတော့ လွတ်လပ်ကာရန်စနစ်နဲ့ဖွဲ့တဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာနည်းပါ။ ဒါက ၁၉-ရာစုအလယ်‘မေဂျီခေတ်’မှာ ဥရောပနဲ့ ဆက်စပ်ယှက်နွယ်ပြီးမှ ရလာတဲ့နည်းပေါ့။ ဒီတော့ ‘တန်းခ’။ ‘ဟိုက္ကူ’နဲ့‘ခေတ်ပေါ်ကဗျာ’ဆိုပြီး ဂျပန်ကဗျာပုံသဏ္ဍာန် လမ်းကြောင်း(၃)ခု။ ဒါကို အခုထက်ထိ ဂျပန်ကဗျာ ဆရာတွေ လက်မလွှတ်ကြသေးပါဘူး။ ဒီနည်း(၃)ခုစလုံးနဲ့ဖွဲ့ကြ၊ စပ်ကြတဲ့ ကဗျာစပ်နည်းဟာ ဂျပန်ကဗျာ ရေးစီးကြောင်းရဲ့ အဓိကပုံသဏ္ဍာန်ပဲဆိုပါတော့။
ကျနော်အခု ...၊ ဟိုက္ကူကဗျာတချို့ကို ဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်ဘာသာက တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုကတဆင့် ဘာသာပြန်ရတာပါ။ ဝေမျှခံစားကြည့်စေချင်လွန်းလို့သာ ဆောင်ရွက်လိုက်ရပေမယ့် အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မူရင်းရသကိုတော့ ဘယ်မှာအပြည့်အ၀ရနိုင်ပါ့မလဲ။ ဘာသာပြန်နေရင်းက ငါရေးနေတာ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်နဲ့ နီးမှနီးသေးရဲ့လားဆိုတဲ့ သံသယစိတ်တွေဝင် ၀င်လာလွန်းလို့ရပ်ထားခဲ့ရတာလဲ ခဏခဏပါ။ တခါတလေ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ကဗျာတချို့က ကျနော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ကဗျာထက်ပိုပြီး ခံစားလို့ရနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မှီအောင် ဘာသာမပြန်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့။ ဘာသာဗေဒတံတိုင်းကို လွတ်အောင်မကျော်နိုင်တဲ့ ကျနော့် ချွတ်ယွင်းချက် အဖြစ် ၀န်ခံရမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ (၅-၇-၅) ဆိုတဲ့ ဂျပန်ဟိုက္ကူကဗျာပုံစံကို မရရအောင် ဘာသာပြန်မှ မှန်တယ်လို့ ကျနော် မယူဆပါဘူး။ ဘာသာပြန်တဲ့အခါ မူရင်းကဗျာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ကိုယ်ညီဘို့ပဲ လိုပါတယ်။ (၅-၇-၅) ပုံစံထဲ အတင်းရိုက်သွင်းခြင်းအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ် တိမ်းစောင်းနိုင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်လည်း မတိမ်းစောင်းဘူး၊(၅-၇-၅) ပုံစံ လည်း ၀င်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဒါတောင်မှ မြန်မာစာက ၀ဏ္ဏ တလုံးချင်းစီက အဓိပ္ပါယ်ရှိနေလို့ (၅-၇-၅) ၀င်အောင် လုပ်လို့ ရတယ်လို့ ယူဆရတာပါ။ တချို့ဘာသာစကားတွေက ၀ဏ္ဏတခုချင်းစီမှာ အဓိပ္ပါယ် ရှိချင်မှရှိတာဆိုတော့ (၅-၇-၅) ပုံစံဝင်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ ဂျပန်ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို မြန်မာ ဘာသာပြန်တဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်ကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ (၅-၇-၅) ပုံစံကို အဓိက မထားခဲ့ပါဘူး။
တကယ်တော့ ဟိုက္ကူကဗျာတွေဟာ “တို၊ ကျဉ်း၊ လိုရင်း၊ သန့်ရှင်း”ဆိုတဲ့ အင်္ဂါရပ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ကဗျာတွေပါ။ ကဗျာတွေ တိုသလောက်၊ ကျဉ်းသလောက်၊ ရှင်းသလောက်၊ ဂယက်အနက်တွေကြတော့ တွေးရင်းတွေးရင်း တွေးနိုင်သလောက် အဝေးဆုံးအထိ ရောက်သွားနိုင်တာပါ။ ဒီနေရာမှာဂယက်အနက်၊ သွယ်ဝိုက်အနက်တွေရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့်၊ တနည်းအားဖြင့် ၀င်္ကန္တနည်းကို အသုံးပြုတယ်ဆိုပေမယ့် ဂမ္ဘီရဆန်တဲ့အထိတော့မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ သန့်ရှင်းတဲ့ဂုဏ်၊ ရိုးဂုဏ်အပြည့်ရှိတယ်လို့ ဆိုကြတာ ပေါ့။
အခုလို မျက်မှောက်ခေတ် ရာဇ၀င်ရေးကာလမျိုးမှာ ဟိုက္ကူကဗျာတွေဟာ တကယ်ကော လိုအပ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မိတ်ဆွေတချို့က ထောက်ပြတာလဲရှိပါတယ်။ ကျနော့်အဖို့တော့ ‘အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး’ ပဲ။ ဒီခေါင်းစဉ် ဒီပေတံနဲ့ ဒီအကန့် တကန့်အတွင်းမှာ “လွတ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ တည်ကြည်မှုနဲ့ မေတ္တာတရား”ကို အခြေခံ တဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာတွေဟာ ကျနော်တို့အတွက် အသုံးမတည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပဲ အခိုင်အမာယုံကြည်မိပါတယ်။
‘ဆေးရှိယာမာဂူချိ’ရဲ့ ‘ကောင်းကင်ထဲက ပျောက်နေတဲ့စွန်ကြိုးတချောင်း’ကိုတော့ မြင်အောင်ကြည့်ကြ ပါစို့လို့ ကျနော် အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။ ။
ချက်ချင်းဆိုသလို လရောင်လင်းထိန်သွား ...၊
အို - ဟေမန္တ
ငါ - မင်းဘ၀ပုံပြင်ကို ကြားခဲ့ပြီးပြီကွဲ့။
မိုးရေစိုရွှဲ တကောင်ထဲ ...။
ကိုးကား။ ။ 1. ANTHOLOGY OF MODERN JAPANESE POTERY
(၂၀၀၅-ခု၊ နှစ်ဦးပိုင်း ... ခေတ်ပြိုင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတွင် “မောင်ဖူးတင့်” အမည်နဲ့ ဖော်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 12:42 AM2comments:
နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုမြို့က “မော်ဒန်အနုပညာပြတိုက်” တခုမှာ တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ရုပ်ထုတခုပါ။ အလျား ပေ (၄၀) ခန့်၊ အနံ ပေ (၃၀) ခန့်၊ အခန်းလွတ်တခုထဲမှာ လူတယောက်မှောက်ခုံအိပ်နေတဲ့ ရုပ်ထုပါ။ အခန်းကြမ်းပြင်ရဲ့ အလယ်ခေါင်မှာ အနားညီစတုဂံပုံသဏ္ဍာန် လက်တ၀ါးခန့်မြင့်တဲ့ ကြမ်းပြင်တခုရှိပြီး အဲဒီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပဲ ရုပ်ထုကို တင်ထားတာပါ။ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဒူးနှစ်ဖက်က ကြမ်းပြင်နဲ့ ထောက်ထားလို့ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ ကြမ်းပြင်နဲ့ သုံးလက်မလောက် ကွာနေပါတယ်။ ကြောပြင်ပေါ်မှာ ဖြူပြာရောင်မီးချောင်းလေးတချောင်း ကကြီးပုံသဏ္ဍာန်တင်ပြီး ထွန်းထားပါတယ်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ထိပ်က မီးကြိုးတချောင်းစီ ထွက်လာပြီး ခေါင်းရင်းဖက်က ကြမ်းပြင်ကို စိုက်ထားတဲ့ ကကြီးပုံသဏ္ဍာန် မီးချောင်းလေးဆီ သွယ်ထားပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ တခြား ဘာတခုမှ ချိပ်ထားဆွဲထားတာ မရှိပါဘူး။ အခန်းကြီးတခုလုံး အဲဒီရုပ်ထုတခုပဲ ရှိပါတယ်။ ခြေရင်းဘက် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတော့ သုံးမြှောက်တုံး သစ်သားတုံးလေးတတုံး ချထားပြီး ရုပ်ထုရဲ့အမည်ကို ရေးထားပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ ကင်မရာကို မီးဖွင့်ပြီး မရိုက်ရဘူးလို့ တားမြစ်ထားတဲ့အတွက် ရှိတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ရုပ်ထုရဲ့အမည်က “The River” တဲ့။ မော်ဒန်အနုပညာ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ခံစားမှု မျှဝေကြည့်လိုက်တာပါ။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 6:55 AM2comments:
Labels: နိုင်ငံတကာကဗျာ မိတ်ဆက်, မော်ဒန်ရုပ်ထုတခုကို မျှဝေခံစားခြင်း
ဒီတခါတော့ ဘယ်လိုမှ မြန်မာလိုမီအောင် ဘာသာမပြန်နိုင်လို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ဟိုက္ကူကိုပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်ကို အကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့ ဒီဟိုက္ကူကဗျာလေးကို ၀ိုင်းကူပြီး ဘာသာပြန်ပေးကြပါလား။
ကျနော့်မှာတော့ ဘယ်လိုမှမီအောင် ဘာသာမပြန်နိုင်ခဲ့ဘူး။
Translated by Lucian Stryk
ကျနော် အလေးအနက်ထားပြီး သဘောတူတဲ့အနေနဲ့
နောက်ပိုင်းမှာ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို တင်တဲ့အခါ
“ဟိုက္ကူကဗျာ မိတ်ဆက်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ
သဘောတူတယ်မို့လား တူမလေးဂျစ်တူး ... ဟုတ်။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 6:33 PM9comments:
Posted by ငြိမ်းဝေ at 10:21 PM 1 comment:
ဘလော့လောကထဲကို ၀င်တဲ့အခါ ဘယ်လောကနဲ့မှ မတူတဲ့ ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ကိစ္စတချို့ ကျနော်ကြုံရတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်ဆက်ဆံရတဲ့လူ၊ ကိုယ်ဆက်ဆံရမယ့်လူ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ဆက်ဆံမိတ်ဖွဲ့လာတဲ့၊ လာမယ့်လူ အဲဒီလူတွေရဲ့ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားကို ခန့်မှန်းရတဲ့ကိစ္စပါ။ အများအားဖြင့်တော့ ခန့်မှန်းရ သိပ်မခက်ပါဘူး။ သူတို့ရေးတဲ့စာ၊ ကျနော်သိတဲ့လူနဲ့ တခြားလူတယောက်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေး၊ ဒါတွေကို ချိပ်ဆက်စဉ်းစားရင် သိပ်ပြီး မကွာလှတဲ့ ခန့်မှန်းခြေကို ရပါတယ်။ ကျနော်ကြုံတဲ့ အခက်အခဲက သူများကို အကဲခတ်ဖို့ခက်တဲ့ အခက်အခဲမဟုတ်ပါဘူး။ သူများတကာက ကိုယ့်ကို အသက်အရွယ်အတွက်အချက်မှားပြီး ဆက်ဆံလာတဲ့အခါ၊ မမျှော်လင့်ပဲ အထင်အမြင်လွဲမှုလေးတွေ၊ ဖွင့်ပြောဖို့မသင့်တဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ကြုံတွေ့ရ တတ်တဲ့ အခက်အခဲပါပဲ။
ဒီလို အခက်အခဲတွေက တဖက်လူရဲ့ အကဲခတ်ချက်၊ လွဲချော်သွားတာနဲ့ သက်ဆိုင်သလို ကျနော့်ရဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတချို့နဲ့လည်း ဆိုင်တယ်လို့ ကျနော်ခံယူပါတယ်။ ကျနော်က လူတွေကို အရမ်းခင်တတ်တယ်။ (စာပေသမားတွေကို ပြောတာပါ။) ပြီးတော့ သင့်၏မသင့်၏ သိပ်ပြီးမချင့်ချိန်တတ်ဘူး၊ စတတ်နောက်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ခဏ.ခဏ ပြဿနာကြုံရတယ်။ ကြုံပြီးရင်လည်း ကျနော့်မှာ တခါတလေ ဖြေရှင်းရ၊ တခါတလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသဖြစ်ရ ...။
အခုလို လူချင်းလုံးဝမတွေ့ဘူးပဲ စိတ်မှန်းနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ဘလော့လောကထဲကိုဝင်တော့ အဲဒီပြဿနာဟာ ကျနော့်ကို တော်တော်လေး ဒုက္ခပေးပါတော့တယ်။
၁၉၉၂-ခု၊ ဇွန်လထဲမှာ ကျနော် “မာနယ်ပလော တောမှော်ရုံတက္ကသိုလ်” ကို ရောက်တော့ အသက် (၄၅) နှစ် ရှိပါပြီ။ နောင်အခါ စဉ်းစားကြည့်တော့ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ကျနော် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေက တကယ့်ကို အံ့ဘနန်းပဲ။ ၁၉၉၂-ခုနှစ်ကတည်းက တနှစ်တခါ၊ တခါသွားရင် အနည်းဆုံးတလ၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် (ဘယ် သူကမှ တာဝန်ပေးလို့မဟုတ်ဘူး) ရှေ့တန်းကို ဆင်းခဲ့တာတွေ၊ ကျနော်ထင်တယ် အဲဒီတုန်းကများ ရွာထဲမှာ ၀င်ပြီးအိပ်တာ မရှိသလောက်ပဲ။ သစ်ပင်အောက်မှာ အိပ်ခဲ့တာ။ တောင်တွေကျော် နေ့စဉ်ရက်ဆက်ခရီးသွား ...၊ ဒီလိုအလုပ်ကို ကျနော်ကလုပ်တော့၊ အစကတော့ ဘယ်သူမှမအံ့သြပေမယ့် ကျနော့်အသက်အရွယ်ကို ပြောပြလိုက်ရင်တော့ အားလုံးက လက်ဖျားခါသွားကြတာချည်းပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျနော့်ထက် အသက်အရွယ် ငယ်တဲ့သူ တချို့တောင် ကျနော့်လောက် အပင်ပမ်းမခံနိုင်ကြတာကိုတွေ့တော့ ကျနော့်ကို ပိုပြီး အံ့သြကုန်ကြ တာပေါ့။
ပြီးတော့ ကျနော်က တွေးတဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်း လူငယ်တွေနဲ့၊ လူငယ်တွေဖက်က အမြဲပါလေ့ရှိတယ်။ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရင်လည်း ကိုယ့်အသက်အရွယ်ကို ဘေးချိပ်ပြီး မေ့ပြီး တကယ့်ကို ရွယ်တူတွေလိုဆက်ဆံတတ်တယ်။ အလုပ်တွေ လုပ်တော့လည်း သူတို့နဲ့အတူ ၊ ဒီကြားထဲ စာကလေး ပေကလေးကလည်း ရေးဆိုတော့ ဟိုတုန်းက အသက် (၂၀) နီးပါးငယ်တဲ့ လူငယ်တွေအားလုံးက ကျနော့်ကို “ကိုငြိမ်း” ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ပဲ ဆက်ဆံခဲ့ကြ တယ်။ အဲဒါ အဲဒီအချိန်တ၀ိုက်ကတည်းက ဆက်ဆံခဲ့ကြရတဲ့ လူငယ်တွေအားလုံး သိကြပါတယ်။ (တချိုိ့ ... ဘလော့လောကထဲမှာရှိပါတယ်။) ဒီတုန်းကတော့ ပြေးဟ၊ လွှားဟ၊ ပျော်ဟ ပါးဟနဲ့ နေခဲ့နိုင်တဲ့ဘ၀ဆိုတော့ ပြဿနာရယ်လို့ သိပ်ပြီး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အသံလွှင့်ဌာနတခုမှာစပြီး အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတော့ ပြဿနာက စတော့ တာပါပဲ။
တခါတုန်းက တယ်လီဖုန်းထဲကတဆင့် အသံလွှင့်ဌာနတခုက မိန်းခလေးတဦးနဲ့ စကားပြောရတယ်။ အလုပ် သဘောအရလည်း ခဏခဏ ဆက်ဆံရတယ်။ ကျနော့်အကျင့်က ကိုယ့်ထက် အသက်ဘယ်လောက်ပဲငယ်ငယ် တစုံတရာအတိုင်းအတာအထိ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု၊ နားလည်မှုမရသေးခင်အချိန်အထိ “ကျနော်” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ကိုပဲ သုံးတတ်၊ သုံးချင်တယ်။ ကျနော်က တယ်လီဖုန်းထဲကတဆင့် စကားပြောတဲ့အခါ အဲဒီမိန်းခလေးရဲ့ အသက်အရွယ်ကို ခန့်မှန်းမိပေမယ့် သူက မခန့်မှန်းနိုင်ရှာဘူး။ သူက သူနဲ့ရွယ်တူသာသာလို့ပဲ ယူဆပြီး ခေါ်ဝေါ် ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ တနေ့ကြတော့ ကျနော်နေတဲ့ မြို့က စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာ မိန်းခလေးတဦးက စာအုပ်တွေ ၀င်ရွေးနေတာနဲ့ ကြုံရပါတယ်။ ကျနော်က ဆိုင်ရှင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူဆိုတော့ နောက်ဖေးခန်းထဲဝင်ပြီး “မျက်နှာစိမ်း” မ်ိန်းခလေးကို စူးစမ်းကြည့်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်ကလည်း အဲဒီမိန်းခလေးကို နာမည်တပ်ပြီးခေါ်ပြောနေတာမို့ ဖုန်းထဲမှာ ကျနော်နဲ့ခေါ်ပြော ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ မိန်းခလေးဆိုတာ အတတ်သိရတော့တာပေါ့။ ဒီတုန်းက ကျနော့်မှာ အပြင်ထွက်ပြီး နှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့ အဲဒီမိန်းခလေးကို အားနာနေခဲ့မိပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက် တွေက ခဏ.ခဏ ကြုံခဲ့ရတယ်။
ဘလော့လောကထဲကိုဝင်တော့ ဟိုးတချိန်တုန်းကတည်းက ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်တချို့ကလည်း “ကိုငြိမ်း” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သုံးပြီး ဆက်ဆံ၊ ကိုယ်ရေးတဲ့စာတွေကလည်း လူငယ်တွေနဲ့ င်ါလား၊ ငါလား (အဲလေ ... နင်လား ငါလား) ဆိုတော့ မမျှော်လင့်တဲ့ အသက်အရွယ်ခန့်မှန်းမှုတလွဲတွေ ကြုံရပြန်ရော။ ဒီကြားထဲက နဂိုရ် ကတည်းက ခတ်ပျော်ပျော်၊ ခတ်နောက်နောက်နေတတ်တဲ့အကျင့်ကပါနေတော့ အခုမှသိရပြီး ကိုယ့်ထက် အများကြီးငယ်တဲ့ မိတ်ဆွေ ဘလော့ဂါတချို့ကို စာရေးပြီးနောက်မိပြောင်မိလို့၊ ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ကိုယ်ပြန်ဖတ်ပြီး ဖြုတ်ချလို့ရတာဖြုတ်ချ၊ ဖြုတ်ချလို့မရတာကြတော့ အိပ်မပျော်နိုင်လောက်အောင် စိတ်ဆင်းရဲ ...။
အခုတော့ ... အဲဒီပြဿနာကို ကျနော်ရပ်လိုက်ချင်ပြီ။ ကျနော်က အရပ်ကလည်း ပု၊ နေ့စဉ်အားကစားလေ့ကျင့် တဲ့ အလုပ်ကလည်းလုပ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်တော့မှ လူငယ်တွေထက် နောက်မကျစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်း လက်မလွှတ်နိုင်ဆိုတော့ အသံနဲ့ရုပ် နှစ်ခုစလုံးက လူငယ်တွေနဲ့ နင်လားငါလားဆိုတော့ “ခင်မင်းဇော်” တို့လို ဘလော့လမ်းသူရဲမလေးတွေအဖို့ အမြင်မတော်၊ မျက်စေ့နောက်တောက်တောက်ဖြစ်ကုန်ကြရဟန်တူပါရဲ့။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီကိစ္စဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျနော်ဖြတ်ပါတော့မယ်။ ဒီစာကို နိဂုံးမချုပ်ခင် “ခင်မင်းဇော်” တို့ နိုင်းနိုင်းစနေ တို့ကို ( “နိုင်းနိုင်းစနေ”ဆိုတာက ကျနော်နဲ့ တခါမှ စာရေးပြီး မရင်းနှီးရသေးပေမယ့် သူရေးတဲ့စာတွေဖတ်ပြီး သားသမီးတယောက်လို ခင်မင်ရင်းနှီးလို့ အခုလိုထည့်ပြောလိုက်တာပါ။) အကြံတခုပေးချင်ပါတယ်။
၁။ ဘလော့လောကထဲမှာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲလေးတခု လုပ်ကြရရင် မကောင်းဘူးလား
၂။ လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိကြရင် ကျနော့်ကို အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းကြဘို့ ကျနော် အကြံပြုလိုက်ပါရစေ ... ။
“နုပျိုခြင်း” ဟာ လာဘ်တပါးဆိုပေမယ် ကျနော့်မှာတော့ တခါတခါ အတော့်ကို စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ “စုတ်တပါး” ဖြစ်နေတာ ဒီစာကိုရေးပြီး စိတ်ဖြေလိုက်ရပါပြီ။
ဘလော့ဂါ တူ တူမငယ်များ အချင်းချင်းသည့်ထက်ပိုပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး လောကကြီးကို သည့်ထက်ပိုပြီး အလှဆင်နိုင်ကြပါစေ ...။
“ဦးငြိမ်းဝေ” နဲ့ မတူတဲ့ “နုပျိုခြင်း” လာဘ်ကိုပဲ ရနိုင်ကြပါစေ ...။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 9:41 PM9comments:
တခါတရံ မဂ္ဂဇင်းတချို့တွင် ကဗျာရွတ်ပွဲများအကြောင်းကိုဖတ်ရသည်။ ထိုအခါ ကဗျာရွတ်ဆိုသည့်အလေ့အကျင့်အနည်းအကျဉ်း ရှိလာခဲ့သူမိမိအဖို့ အလိုလိုတက်ကြွရွှင်လန်းနေမိသည်။ မဂ္ဂဇင်းထဲတွင်ပါသည့် ကဗျာရွတ်ပွဲသတင်းများကို ဖတ်ကာစိတ်ကူးနှင့်မြင်ကြည့်သည်။ စိတ်နားနှင့် ထောင်ကြည့်သည်။ ကဗျာရွတ်ဆိုနေကြသူများ၏ ကိုယ်ဟန်အမူအယာများကို စိတ်ကူးဖွဲ့ကြည့်သည်။ ရွတ်ဆိုကြသည့်ကဗျာများထဲ၌ မိမိကျက်မှတ်မိပြီးကဗျာပါဝင်ပါက ကိုယ်တိုင်ကဗျာဝင်ရွတ်နေသလို စိတ်လှုပ်ရှားရသည်။ ကဗျာတပိုင်းတစကို ပါးစပ်က အလိုလိုရွတ်ဆိုမိလျက်သားဖြစ်ရသည်။ ကဗျာရွတ်ပွဲတွင် ပါဝင်ရွတ်ဆိုသူများ၏ ရင်ခုန်မှုအရှိန်အဟုန်များမှာ မီးတောက်တခုက တခြားမီးတောက်တခုဆီ ယိမ်းထိုးကူးယှက်သွားသလို မိမိထံ ထိယှက် ပူးဝင်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ဟန်တူလေသည်။
အမှန်စင်စစ် ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းအလုပ်ကို မိမိကိုယ်တိုင်က အသိရှိရှိနှင့် စတင်ဆောင်ရွက် လိုက်ခြင်းတော့မဟုတ်ချေ။ ၁၉၉၃ ခု။ မာနယ်ပလောတွင်ကျင်းပသည့် စာဆိုတော်နေ့အခမ်းအနားတွင် ရှုဒေါင့်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာဟောင်း (ဦး)၀င်းခက်က “မနက်ဖြန်ကြရင် ဒီကဗျာကို ရွတ်ပေးစမ်း”ဟု ဆိုခြင်းဖြင့် မိမိမှာ ကဗျာရေးသူအဖြစ်မှ ကဗျာရွတ်သူအဖြစ်သို့ ဖြတ်ကနဲကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ရ၏။ ရွတ်ဆိုရမည့်ကဗျာက ဆရာ မောင်သော်က၏ “မီးခြစ်တစ်ဆံ”ကဗျာဖြစ်သည်။ စကားပြောခွက်ရှေ့ကိုရောက်သည်အထိ မည်သည့်အသံအနေအထားနှင့် ရွတ်ဆိုရမည်ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်သေး။ ကံအားလျော်စွာကဗျာအကြောင်းအရာကို ရုတ်တရက်တွေးမိကာ လက်သီးကိုဆုပ်၊ အသံကိုမြှင့်ပြီး အော်ဟစ်လိုက်မိသည်။ “အနှစ်နှစ်ဆယ်တဲ့လားဟေ့ ...”ဆိုပြီးအော်ဟစ် လိုက်သည့်မိမိ၏အသံမှာ ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးခန်းမဆောင်အတွင်း ပဲ့တင် ထပ်မျှဟိန်းသွား၏။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး သွေးများပူလောင်ဆူပွက်လာပြီး ကျန်ကဗျာပိုဒ်များကို အလိုလိုရွတ်ဆိုမိလျက် သားဖြစ်သွား၏။ မိမိ၏ ခံစားမှုအရှိန်အဟုန်များ လေထဲတွင် ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားနေစဉ် လက်ခုပ်သံများထွက်ပေါ်လာခဲ့၏။ ဆက်လက်ရွတ်ဆိုရန် ကဗျာစာသားမရှိတော့သည့်တိုင်၊ ကဗျာရွတ်ဆိုသံရပ်ဆိုင်းသွား သည့်တိုင်၊ ဖြန့်ထွက်ဝေးကွာသွားနေသည့် စိတ်အလျင်များကို မိမိမှာပြန်လည်ရုပ် သိမ်းလို့မရနိုင်သေး။ မိမိ၏ စိတ်အလျင်မှာ ရှေ့တွင်ထိုင်နေသည့် လူအုပ်၏နှလုံးသားကို ဒိုးယိုပေါက် ထွင်းဖောက်သွားခဲ့၏။ မိမိ၏စိတ်အလျင်များကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းထိန်းချုပ်လာနီုင်သောအခါမူ မျက်လုံးအိမ်များထဲ၌ မျက်ရည်များနှင့် မှုန်ဝါးနေလေတော့သည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အသံလွှင့်ဌာနတခုတွင် ပုံမှန်အစီအစဉ်တခုကို အသံလွှင့်ခွင့်ရ၏။ ယင်းအစီအစဉ်ကို “တော်လှန်ရေးကဗျာမိတ်ဆက်”ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ တပါတ်လျှင်တကြိမ်အသံလွှင့်၏။ ထိုအခါ တပါတ်လျှင်တကြိမ် ကဗျာရွတ်ဆိုရသည့်သဘောဖြစ်လာ၏။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်“မီးခြစ်တဆံ” ကဗျာကိုရွတ်ဆိုစဉ်က ကဗျာအကြောင်းအရာကိုတွေးမိပြီး အများစိတ်ဝင်စားအောင်ရွတ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံအရ၊ အသံလွှင့်ဘို့ရွေး ချယ်ထားသည့်ကဗျာများကို အဓိပ္ပါယ်နားလည်သည်ထက်နားလည်ရန် အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ်ဖတ်၏။ အဓိပ္ပါယ်နားလည်လျှင် ကဗျာဖတ်သည့်အခါ ပိုမိုအဆင်ပြေသည်ကို သတိပြုမိလာ၏။ ကဗျာဖတ်သည့်အခါ စိတ်နှင့်ဖတ်သည်ထက် အသံထွက်ဖတ်ခြင်းဖြင့် ကဗျာရွတ်ဆိုရာတွင် အလုပ် တ၀က်ပြီးသလိုဖြစ်ရ၏။
အသံလွှင့်ရန် ကဗျာများကိုရွေးချယ်ရာ၌ ပထမပိုင်းတွင် ကာရန်ပါသည့်ကဗျာများကိုဖတ်လျှင် ရွတ်ဆိုရ ပိုမိုအဆင်ပြေသည်ဟုထင်၏။ ထို့ကြောင့် ကာရန်ပါသည့်ကဗျာများကိုသာ ဦးစားပေးပြီးရှာဖွေရွတ်ဆို၏။ သို့သော် ရွေးချယ်ထားသည့် အသံလွှင့်အစီအစဉ်ခေါင်းစဉ်က “တော်လှန်ရေးကဗျာမိတ်ဆက်”ဟုပေးထားသဖြင့် နိုင်ငံရေးနောက်ခံရှိပြီး ကာရန်နှင့်ရေးဖွဲ့ထားသည့်ကဗျာများမှာ ရှာရဖွေရခက်ခဲလာခဲ့၏။ ထိုစဉ်က မိမိမှာ မာနယ်ပလောတော်လှန်ရေးဌာနချုပ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်သဖြင့်လည်း ပြည်တွင်းမှကဗျာပါသည့် စာအုပ်များကို ဆက်သွယ်ရယူရန်မှာ အခက်အခဲရှိ၏။ အခြေအနေကတောင်းဆိုသဖြင့် ကာရန်မပါပဲရေးဖွဲ့သည့်ကဗျာများ၊ လွတ်လပ်ကာရန်စနစ်ဖြင့်ရေးဖွဲ့သည်ကဗျာများဖက်သို့ အလိုလိုဦးလှည့်ခဲ့ရ၏။ ထိုအခါ ကာရန်မဲ့ကဗျာများမှာ ကာရန်နှင့်ရေးစပ်သည့်ကဗျာများထက် ပိုမိုအားစိုက်ရွတ်ဆိုရန် လိုအပ်ကြောင်း ထူးထူးခြားခြား သတိပြုမိလာရလေသည်။
ကာရန်မပါသည့်ကဗျာများကိုရွတ်ဆိုသည့်အခါ အသံအနိမ့်အမြင့်နှင့် အသံစီးဆင်းပုံ၏ ၀ိသေသကို ထိတွေ့ခွင့်ရ၏။ အသံအနိမ့်အမြင့်နှင့် အကွာအဝေး မတြာများမှာ ပုံမှန်၊ ပုံသေမရှိသဖြင့် ကဗျာရွတ်ဆိုနေစဉ် အသက်ရှူနှုန်းမှာလည်း ပုံမှန်ပုံသေထားပြီး အသက်ရှူလို့မရနိုင်တော့။ ကာရန်နှင့်ရေးဖွဲ့သည့်ကဗျာများမှာမူ ကာရန်အမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီး အသက်ရှူမှုအပြင်း၊ အပေါ့ကွာခြားသည်မှလွဲ၍ အသက်ရှူချိန်၊ ရှူနှုန်း တခုနှင့်တခု သိပ်ပြီးကွာဟမှု မရှိလှ။ မသိသာလှ။ ကာရန်ပါသည့်ကဗျာများမှာ နရီကိုချိန်တွယ်ထားသလောက်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ကာရန်ပါသည့် ကဗျာကိုရွတ်ဆိုလျှင် သီချင်းတပုဒ်ကို လူတိုင်းလိုက်ပြီး စည်းဝါးတီးသလို အထိုက်အလျောက်လွယ်ကူ၏။ ကာရန်မဲ့ကဗျာများ၏ အသံတည်ဆောက်ပုံမှာမူပုံမှန်၊ ပုံသေမဟုတ်သဖြင့် ရွတ်ဆိုရာ၌ တမူထူးခြားသစ်လွင်နေလေသည်။
အသံလွှင့်ဌာနမှတဆင့် ကဗျာရွတ်ခွင့်ရလာသောအခါ ဗြိတိသျှကဗျာဆရာကြီး ‘ဒီလန်တောမတ်စ်’ကို သတိရတတ်၏။ သူက အသံလွှင့် ဌာနမှတဆင့်ကဗျာတွေအများကြီး ရွတ်ဆိုသွားခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန်ကဗျာဆရာများဖြစ်ကြသည့် ‘ရောဘတ်ဖရော့ခ်’နှင့်‘မာယာ အင်ဂျီလို’တို့ကိုလည်း စိတ်ထဲ၌စွဲနေ၏။ သူတို့နှစ်ဦးက အမေရိကန်သမ္မတနှစ်ဦး၏ သမတသစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲများတွင် တက်ရောက်ကဗျာ ရွတ်ဆိုဖို့ ဘိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ကြရသူများဖြစ်၏။ သူတို့တတွေ ဘယ်လိုကဗျာရွတ်သည်ကို မတွေ့မမြင်ဘူးသော်လည်း ကဗျာရွတ်သူများဖြစ်သည်ဟူသည့် အသိတခုတည်းနှင့်ပင် မိမိမှာ ရင်ခုန်လို့မဆုံးချင်တော့။
လူမျိုးနှင့်ချီပြီး ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းနှင့် ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းကို နားထောင်သည့်အလေ့အကျင့်ရှိသူများမှာ ရုရှားလူမျိုးများဖြစ်သည်ဟုကြားဖူး၏။ ကဗျာဆရာ‘မာယာကော်စကီး’နှင့်‘ယက်ဖ်တူရှင်ကို’တို့၏ ကဗျာရွတ်ပွဲများကို ရုရှလူမျိုး ထောင်သောင်းချီပြီး တက်ရောက်နားထောင်တတ်ကြ၏။ ကဗျာဆရာ‘မာယာကော်စကီး’လူပုံအလယ်တွင်ကဗျာရွတ်နေပုံသတင်းဓါတ်ပုံထဲတွင် တွေ့ဖူး၏။ သူတို့၏ကဗျာရွတ်သံများကိုမူ မကြားဘူးသေး။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်လည်ပိုင်းက နော်ဝေနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့အပြန် ရုရှနိုင်ငံ၊ မော်စကိုလေဆိပ်တွင် လေယာဉ်ပြောင်းစီးရန် (၅)နာရီမျှ ထိုင်စောင့်ခဲ့စဉ်က လေဆိပ်ထဲတွင်ရှိသည့် တိတ်ခွေနှင့်စီဒီခွေအရောင်းဆိုင်များတွင် ‘မာယာကော်စကီး’နှင့် ‘ယက်ဖ်တူရှင်ကို’ကဗျာရွတ်ထားသည့် အသံသွင်းတိတ်ခွေများကို တွေ့လိုတွေ့ငြားလိုက်ရှာခဲ့၊ မေးခဲ့ဖူး၏။ ရှာလို့မေးလို့မရခဲ့။
မိမိနိုင်ငံတွင်လည်း ကဗျာရွတ်ပွဲများ ကြိုးကြားကြိုးကြားကျင်းပသည်ကို ကြားနေခဲ့ရ၏။ သို့သော်ကဗျာဆရာများနှင့် ကဗျာချစ်သူအနည်း ငယ်မျှသာစုဝေးကြပြီး တယောက်တလှည့် ကဗျာရွတ်ဆိုကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ အများပြည်သူတက်ရောက်နားထောင်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းနှင့် အလေ့အထကိုမူ ယခုအထိ မဖန်တီးနိုင်သေး။
ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းအလုပ်ကို ခုံမင်မိန်းမူးလာသဖြင့် ကဗျာရွတ်ပွဲများဖြစ်ပေါ်ရန်၊ လူပုံအလယ်တွင် ကဗျာရွတ်ခွင့်ရရန် ဖန်တီးချင်လာခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့အပါအ၀င်၊ တခြားစာပေနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများတွင် ကဗျာတက်ရောက်ရွတ်ဆိုခွင့်ရရန် အခမ်းအနားဦး စီးကျင်းပသူများထံ ချဉ်းကပ်တောင်းဆိုမိ၏။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ကဗျာရွတ်ပွဲ၊ ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်း အစီအစဉ်ပါရှိသည့် အခမ်းအနားများတွင် ကဗျာရွတ်ဆိုခွင့်ရလာခဲ့၏။ တချို့အခမ်းအနားများတွင်မူ မိမိကိုယ်တိုင်က မချဉ်းကပ်ပဲ ကဗျာတက်ရောက်ရွတ်ဆိုပေးပါရန် ဘိတ်ကြားခြင်းကို လက်ခံရရှိလာခဲ့၏။ ယခုအခါ အသံလွှင့်ဌာနအပါအ၀င် အခမ်းအနားပေါင်းစုံတွင် တက်ရောက်ရွတ်ဆိုခဲ့သည့် ကဗျာပုဒ်ရေ (၄၆၀)ကျော်ရှိခဲ့ပြီ။ ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းကြောင့် ရရှိလာသည့် အကျိုးကျေးဇူးမှာ တွေးမိတိုင်း ပီတိဖြစ်ဖွယ်ကောင်းလှ၏။ ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရုရှကဗျာ ဆရာကျော်“ယက်ဖ်တူရှင်ကို”ပြောဖူးသည့်စကားမှာ မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်၏။ သူက “ကဗျာရွတ်တာနားထောင်ပြီးသူတိုင်း နားထောင်သူအဖြစ်မှ ကဗျာဖတ်သူအဖြစ်သို့ မလွဲမသွေရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်”ဟူ၍ ပြောဖူးလေသည်။
ယခုနှစ် ဒုတိယလ၊ လဆန်းပိုင်းတွင် RFAမှတဆင့် “လက်တဖက်ကိုမြဲနေအောင်ကိုင်ထား”ကဗျာကို ကျနော်ရွတ်ဆိုခဲ့၏။ နှစ်ရက်ခန့်ကြာ သောအခါ တယ်လီဖုံးမြည်သံကြားလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်စဉ် “လက်တဖက်က တယ်လီဖုံးကို မြဲနေအောင်ကိုင်ထား”ဟု တဖက်မှကြားလိုက်ရ၏။ တအံ့တသြဖြစ်နေစဉ် “အောင်ခင်လေဗျာ”ဟူသောအသံကိုပါကြားရ၏။ ကျနော့်မှာ မဖေါ်ပြနိုင်လောက်အောင် ၀မ်းသာရ၏။ (၇)နှစ်တာမျှ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့သည့် ‘ဒေါက်တာအောင်ခင်’၏ အသံကို တယ်လီဖုံးထဲမှကြားလိုက်ရ၍ဖြစ်၏။ သူက RFA မှာ ကျနော်ရွတ်ဆိုခဲ့သည့် ခေတ်ပေါ်ကဗျာ‘လက်တဖက်ကမြဲနေအောင်ကိုင်ထား’ကဗျာကိုရည်ညွှန်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ တဆက်တည်းဆိုသလိုပင် ‘ဒေါက်တာအောင်ခင်’လို ကဗျာနှင့်ဝေးနေသူအဖြစ် မိမိဖက်မှ ယူဆထားသူတဦးထံမှ ‘အဲဒီကဗျာက ကာရန်မပါဘူးဗျ၊ ခင်ဗျားမိုလို့ နားထောင်ကောင်း တာနဲ့တူတယ်၊ တခြားလူဆိုရင် ပျက်သွားမှာ’ဟု အားပေးစကားကြားလိုက်ရ၏။ ယခုအခါ ‘ဒေါက်တာအောင်ခင်’သည် ကဗျာနှင့်နီးလာနေပြီလောဟု ပီတိဖြစ်မိသည်။
ကဗျာရွတ်သည့်အခါ ကဗျာရွတ်သံကို နားထောင်သည့်အခါ ရွတ်ဆိုရင်း၊ နားထောင်ရင်း၊ ကဗျာရွတ်သူနှင့် ကဗျာနားထောင်သူ နှစ်ဦးစလုံး စရဏကိုထိန်းကာ လေ့ကျင့်သလိုဖြစ်သွားရ၏။ ပရဟိတ္တကို ထိတွေ့ရ၏။ ဗျာပါဒကို စားသုံးမိသွား၏။ ၀ိမုတ္တိကိုတခဏမျှရ၏။ ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အခြေခံယဉ်ကျေးမှုရေး အုတ်မြစ်တခုချလိုက်သလိုဖြစ်ရ၏။ ထို့ကြောင့် မုဆိုးရာသီ ကုန်ဆုံးပြီး လေးသံမြှားသံများ ထာဝရရပ်စဲကာ၊ တကမ္ဘာလုံး အနှံ့ ကဗျာရွတ်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်လျှင်ကောင်းပေစွဟု တောင်းတမိတော့၏။
(ခေတ်ပြိုင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတွင် ဒီဆောင်းပါးကို “မောင်ဖူးတင့်” ကလောင်အမည်နှင့် ၂၀၀၅၊ မတ်လ -၂၁ ရက် ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့အတွက် ရေးခဲ့သည့်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 5:13 AM 1 comment:
Posted by ငြိမ်းဝေ at 7:21 PM6comments:
Posted by ငြိမ်းဝေ at 6:10 PM No comments:
ဂျပန်ဟိုက္ကူကဗျာဟာ ပုံသဏ္ဍာန်မှာရော အကြောင်းအရာမှာပါ သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ ပုံသဏ္ဍာန်အရဆိုရင် ၀ဏ္ဏ (စကားလုံး) အရေအတွက် (၁၇) လုံးပဲ ရှိရပါမယ်။ စာစီတဲ့ အခါကြတော့ ပါဒ (စာကြောင်းရေ) သုံးကြောင်းစီရပါတယ်။ ၅.၇.၅ ပုံသဏ္ဍန်ပေါ့်။ ကာရန်တော့ မပါပါဘူး။
အကြောင်းအရာကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် သဘာဝအလှပါရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရာသီပြစကားလုံး ပါရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တမဟုတ်ချင်း မျက်စေ့နဲ့မြင်တဲ့အရာရဲ့ နောက်ကွယ်က ဒဿနကို လျပ်တပျက်အတွင်း အမိအရဖမ်းချုပ်တဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ရမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ “ဈင်” ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒဿနကို အခြေခံတဲ့ အကြောင်းအရာက ဟိုက္ကူရဲ့ ပင်မဒဿနလို့ ဆိုကြတာပါ။
အခုတော့ ဟိုက္ကူကဗျာဂိုဏ်းတွေ ဂျပန်မှာတွင်မက ဥရောပမှာပါ တော်တော်များများရှိနေကြပါပြီ။ ထောင်သောင်းချီတဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ၊ ပြိင်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ ဒါကတော့ ဟိုက္ကူကဗျာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး မလွဲမသွေ သိထိုက်တဲ့ကိစ္စတချို့ပါ။ (မသိသေးသူများအတွက်သာ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို ပိုပြီး ခံစားလို့ရအောင် ဆရာလုပ်ခြင်းပါခင်ဗျား ...)
ကျနော်ကတော့ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို မြန်မာမှုပြုတဲ့အခါ ၅.၇.၅ ပုံသဏ္ဍန်နဲ့ ထပ်တူကျအောင် မကြိုးစားပါဘူး။ ကြိုးစားလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ ကြိုးစားရင်လည်း သူ့ရဲ့ “အနက်” ကို ချို့ယွင်းသွားစေမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်ကြိုက်သလိုပဲ မြန်မာမှုပြုလိုက်ပါတယ်။ ကာရန်ပါတဲ့အခါပါ၊ မပါတဲ့အခါ မပါပေါ့။ “အနက်” ကိုပဲ အဓိကထားပြီး ဖမ်းဖို့ကြိုးစားထားပါတယ်။
ချစ်စရာ နောက်ထပ်ဟိုက္ကူကဗျာတပုဒ် မြည်းကြည့်ကြပါဦး ... ။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 6:33 PM 1 comment:
ဂျပန် ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို ဖတ်ပါတယ်
ဂျပန်လို မတတ်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတာကိုပဲ
ခြောက်တိခြောက်ချက် အင်္ဂလိပ်စာ အခံလေးနဲ့ ကြိုးစားပြီး ဖတ်ပါတယ်
(၂) နှစ်လောက်အထိ သွားလေရာ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို ယူသွားလေ့ရှိခဲ့တယ်
ဟိုက္ကူကဗျာ (၆၀) ကို မြန်မာဘာသာပြန်ပြီး
ချစ်စရာ့ ဟိုက္ကူကဗျာဆိုတဲ့ မိတ္တူကူး ကဗျာစာအုပ်လေးတအုပ် ထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်
ဟိုက္ကူကဗျာတွေအပေါ် ခံစားရှုမြင်တဲ့ ဆောင်းပါးတချို့ ရေးခဲ့ဖူးတယ်
ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ စာစောင်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ
နိုင်ငံရေး မပါဘူး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ကြလို့နဲ့တူပါတယ်
ကျနော့်မှာ ကိုယ်ပိုင်စင်ကလေးတခု ရှိနေပြီ
ဟိုက္ကူကဗျာတွေ မကြာခဏဆိုသလို ကျနော် တင်ပါတော့မယ်
ဒီကနေ့တော့ ဟောဒီ ဟိုက္ကူကဗျာတပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ...။
အားလုံးကို မင်း ... မြင်ခဲ့ တွေ့ခဲ့ပြီးပြီပဲ
EYES, YOU HAVE SEEN ALL ...
COME BACK TO THE WHITE CHRYSANTHEMUN!
(TRANSLATED BY PETER BEILENSON AND HARRY BEHN)
မှတ်ချက်။ ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို တင်ဆက်တဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နဲ့တွဲပြီး တခါတလေမှပဲ ဖော်ပြပါ့မယ်။ ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ မြန်မာဘာသာပြန်ထားတာကို ယုံကြည်လို့ပါ။ တခါတလေကြတော့လည်း အခုလိုပဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နဲ့ ပူးတွဲပြီး ဖော်ပြပါ့မယ်။ ဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်က ကျနော် မြန်မာဘာသာပြန်ထားတာထက် ပိုပြီး ကောင်းတယ်လို့ ယူဆလို့ပါ။
အော် ... ပြောဖို့မေးသွားတယ်။ တခါတလေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နဲ့ ကျနော် မြန်မာဘာသာပြန်ထားတာကို ဘာပြုလို့ ပူးတွဲပြီး မဖော်ပြချင်ရတာလဲဆိုတော့ ... ဟဲဟဲ ... ကျနော့်ရဲ့ဘာသာပြန်တလွဲကြီးကို စာဖတ်သူတွေသိမှာစိုးလို့ ...
စာဖတ်သူများ ဟိုက္ကူကဗျာတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါစေ။ ကျေးဇူး
Posted by ငြိမ်းဝေ at 7:44 PM 1 comment:
Labels: နိုင်ငံတကာကဗျာ မိတ်ဆက်, နိုင်ငံ့တကာကဗျာ မိတ်ဆက်
၂၀၀၄-ခုနှစ်တုန်းကပါ။ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ထုတ်ဝေတဲ့ “ရေစီးသံ” ဂျာနယ်မှာ “ဥရောပမဲဇာ” ခရီးသွား အခန်းဆက်ဆောင်းပါးတွေကို ကျနော်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ရေစီးသံဂျာနယ်ထွက်စက (၁၅) ရက် တကြိမ် ထုတ်ဝေတာပါ။ နောက်ပိုင်းကြတော့ တလတကြိမ်၊ ဒိနောက်ပိုင်းကြတော့ နှစ်လ သုံးလနေမှ တကြိမ်။ ကျနော်က နှစ်လသုံးလမှ တကြိမ်ထုတ်တဲ့ အချိန်အထိ အခန်းဆက်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ရေးတော့လည်း စာဖတ်သူတွေ မပျင်းရိရအောင် “ဥရောပမဲဇာ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာ ခေါင်းစည်းငယ်လေးတွေ ဖွဲ့ပြီးရေးပါတယ်။ ဥပမာ ... “ဥရောပမဲဇာ” ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာ “နမ့်စွယ်ချောင်းမှသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒွန်မောင်းလေဆိပ်သို့” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ငယ်ရဲ့အောက်မှာ နံပါတ်စဉ် (၁) (၂) (၃) ... အစ ရှိသဖြင့် ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ရေးလာလိုက်တာဟာ (၂) နှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပါတယ်။
အခု ... ကျနော့်ကိုယ်ပိုင် “ဘလော့” လေးမှာ “ဥရောပမဲဇာ” အခန်းဆက်ဆောင်းပါးတွေကို တင်ပြဖို့ စဉ်းစားတော့၊ ကျနော့်ဆောင်းပါးတွေဟာ ရှေ့နောက်အစီစဉ်အတိုင်း မဖော်ပြပဲ၊ အဆင်ပြေသလို စိတ်ပါသလို ကြုံသလို တင်ပြရင်လည်း ဖတ်လို့ရတာပဲဆိုပြီး အကြံပေးတဲ့သူကလည်း ပေးလို့ “ဥရောပမဲဇာ” ခရီးသွား ဆောင်းပါးတွေကို အဆင်ပြေသလိုပဲ တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခါ ကျနော်တင်တဲ့ ပို့စ်ကတော့ ဥရောပမဲဇာ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေထဲက ရထားတစင်းနဲ့ ရွာလည် ခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာပါ။ ဒေါ်တန်ခူးရဲ့ ရထားစီးအတွေ့အကြုံဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဆောင်းပါးက ချာတူးလန်ဆောင်းပါးဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ သိပေမယ့် နည်းနည်းတော့ကြွားချင်သေးလို့ မျက်စေ့မှိတ်ပြီး ပို့စ် တင်လိုက်ရပါတယ်။
ပီရူးဂီတ၊ စကော့တလန် ပုလွေသံ အာဖရိက ဗုံသံနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ထောင်ချောက်ငယ်များ (၆)
အို ... မိတ်ဆွေဗိုက်ကင်းကြီးရဲ့
“ဟော့ဒေါ့” နဲ့ “ဟမ်ဘာဂါ” ကို
ပီရူးဂီတ၊ စကော့တလန် ပုလွေသံ
ဒါတွေကို စွဲမက်ခဲ့သူပါ ... ... ။
“ဥရောပမဲဇာ” ကဗျာရှည်မှ ...
“ကိုငြိမ်းဝေက နော်ဝေးရောက်ခါမှပဲ၊ ကမ္ဘာကြီးလုံးတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့သိသွားတာဗျ”
ကိုမောင်မောင်မြင့်၏ စကားကို ကျနော်နှင့် တအိမ်တည်းနေသူ ကိုမွန်းအောင်(တေးသံရှင်မွန်းအောင်)က အပြုံးနှင့် ထောက်ခံ သည်။ ကျော်ကျော်နှင့် ထွန်းထွန်းတို့က ကျနော့်ကို ပြိုင်တူကြည့်ပြီး ပြုံးကြ၏။ တခြား ဒီဗွီဘီအဖွဲ့သားများကမူ နားမလည်သလို ၀ိုင်းကြည့်ကြလေသည်။
မိုးမိုးထွန်း၏ အမေးကို ကိုမောင်မောင်မြင့်(ယခု မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ)က ပြန်မဖြေသေးဘဲ ပြုံးနေ၏။ ကျနော်အဖို့ သည်အတိုင်း ငြိမ်နေလို့ မဖြစ်တော့။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ၀င်မရှင်းလျှင် လူတွေပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကာ အကျနာတော့မည်ကို သိသဖြင့် ကျနော်ကိုယ်တိုင် အကျိုးအကြောင်း ၀င်ရှင်းပြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရ၏။
ယမန်နေ့ညနေက ကိုမောင်မောင်မြင့်တို့အိမ်ကို ကျနော်သွားခဲ့သည်။ မသွားခင် ကိုမောင်မောင်မြင့်ထံ ကျနော် ဖုန်းဆက်၏။ နောင်လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် “ဘော့စ်” မြို့၌ ပြုလုပ်မည့် တက္ကသိုလ်ဝင်ကျောင်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ကျနော့်အနေနှင့် မိတ်ဆက်စကားပြောဖို့ ရှိနေ၏။ သို့သော် ကျနော်က စီကာပတ်ကုံး မပြောတတ်။ အင်္ဂလိပ်လို ချရေးပြီးဖတ်ပြဖို့ စဉ်းစားပြန် တော့လည်း ကျနော်က အင်္ဂလိပ်စာကို ဖတ်ကျင့်သာရှိပြီး ရေးကျင့်မရှိ။ ထို့ကြောင့် ကျနော်ပြောသမျှ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ရေးပေးဖို့ ကိုမောင်မောင်မြင့်ထံ အကူအညီတောင်းခဲ့၏။ ကိုမောင်မောင်မြင့်က သတောတူသဖြင့် သူ့ထံ ကျနော်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေသည်။
ကျနော့်အဖို့ ကိုမောင်မောင်မြင့်တို့အိမ်ကို ယခင်က နှစ်ကြိမ်မျှ ရောက်ဖူးပြီးဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်ကမူ လမ်းသိသည့် အဖော်၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်၏ အားနည်းချက်အတိုင်း လမ်းခရီး၏ထူးခြားချက်နှင့် အလှအပများကိုသာ ဂရုတစိုက်ကြည့်တတ်ပြီး ဘူတာအမည်များ၊ လမ်းခရီးတွင် ဖြတ်သည့် ဘူတာများကို ဂရုမစိုက်ခဲ့မိ။ အထူးသဖြင့် ကိုမောင်မောင်မြင့်တို့အိမ် သွားသည့်ခရီးမှာ အထူးတလည် မှတ်သားပြီး အဆင့်ဆင့်သွားဖို့မလိုဘဲ စတင် တက်စီးသည့် မြေအောက်ဘူတာမှတဆင့် ယင်းမီးရထားလိုင်း အဆုံးအထိ စီးသွားရသည့် ခရီးဖြစ်သဖြင့် မှတ်ရလွယ်၏။ ထို့ကြောင့် ယခုတကြိမ် တယောက်တည်းသွားဖို့ စီစဉ်သောအခါ ကျနော့်မှာ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမားမရှိဟု ယူဆခဲ့ပါသည်။
ပထမ ... ကျနော်တို့အိမ်နှင့် အနီးဆုံး ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှ အမှတ် (၃၇) ကားကိုစီးကာ ကိုအေးချမ်းနိုင် တို့ အိမ်ရှေ့တွင် ဆင်း၏။ တခါ မြေအောက်ဘူတာရုံကလေးထဲသို့ ဆင်း၏။ ပြီးမှ အမှတ် (၂) မြေအောက်ရထား ပေါ် ကျနော် ရောက်လာခဲ့သည်။ လမ်းတွင် ဘူတာရုံ ဘယ်နှစ်ခုမျှ ဖြတ်လာခဲ့ရသည်ကို ကျနော် စိတ်မ၀င်စား။ ရထားလမ်းဆုံးတွင် သူများနည်းတူ ရထားပေါ်ကဆင်း မြေပေါ်တက်ခဲ့၏။ မြေပေါ်က ရထားလက်မှတ်ရောင်း သည့် အခန်းရှေ့မှ ဖြတ်ကာ အပြင်ဘက် ထွက်လိုက်သည့်အခါ ကျနော့်ခြေလှမ်းများ ဘယ်လိုဆက်လက်လှမ်းရ မည်ကို မသိအောင် ဖြစ်တော့၏။ ထိုအခါကျမှ ကျနော် ရထားမှားပြီး စီးခဲ့သည်ကို သိလိုက်ရတော့သည်။
ကိုမောင်မောင်မြင့်တို့အိမ်မှာ ဘူတာထဲက ထွက်၊ လက်ဝဲဘက်လမ်းကို သွား၊ တံတားတခုကိုကျော်၊ တောင်ကုန်းပေါ်က ဆင်းလျှင် (၅) မိနစ်အတွင်း အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်နိုင်သည်။ ယခုတော့ ရှေ့တည့်တည့်သို့သာ သွားသည့် လမ်းတခုတည်းသာ ကျနော့်ရှေ့မှာ ရှိနေ၏။ ကျနော် ရထားမှားပြီး စီးခဲ့ပြီ။
မြေအောက်ဘူတာရုံထဲ ပြန်ဆင်းခဲ့ရပြန်သည်။ ထွက်ခါနီး စက်နှိုးထားသည့် ရထားပေါ် တက်ခဲ့၏။ ကျနော် တက်ခဲ့သည့်ဘူတာအထိ ပြန်စီးရန် စဉ်းစားသည်။ ဘူတာတခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခုကျော်လာခဲ့ပြီ။ ကျနော့်မျက်လုံးများ ပြူးကျယ်လာရ၏။ ဖြတ်လာခဲ့ရသမျှ ဘူတာရုံများ၏ အခင်းအကျင်း၊ အခြယ်အသမှာ တခုနှင့် တခု ဆင်တူးယိုးမှား ဖြစ်နေကြ၏။ ပိုဆိုးသည်မှာ ဘူတာရုံနာမည်များမှာ နော်ဝေးဘာသာနှင့်သာ ရေးထား၏။ ထို့ကြောင့် နိဂိုကတည်းက ဘယ်ဘူတာက စတင်စီးသည်၊ လမ်းတွင် ဘူတာဘယ်နှစ်ခုဖြတ်ရသည် ဆိုသည်ကို မှတ်သားမထားခဲ့သည့် ကျနော့်အဖို့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျရလေတော့၏။ ဟုတ်နိုးနိုး တွေ့နိုးနိုးနှင့်ဘူတာ အတော်များများကို ကျော်လာခဲ့၏။ နောက်ဆုံးတွင် တစုံတခုဆုံးဖြတ်ကာ ရောက်သည့်ဘူတာတခုတွင် ကျနော်ဆင်းလိုက်၏။ တွေ့လို တွေ့ငြား ဇဝေဇ၀ါစိတ်နှင့်ပင် ဆန့်ကျင်ဘက်ရထားပေါ် ကျနော် ပြန်ပါလာခဲ့ပြန်သည်။
ဘူတာ (၃) ခုမျှ ကျော်မိသောအခါ၊ အင်္ဂလိပ်လို ဆိုင်းဘုတ်တခုကို မမျှော်လင့်ပဲ ကျနော် တွေ့လိုက်ရ၏။ သို့သော ကျနော်စီးလာသည့် ရထားက ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် ရှေ့ဘူတာတွင် ပြန်ဆင်းကာ၊ ယင်း ဆိုင်းဘုတ်ရှိသည့်ဘူတာသို့ ပြန်စီးရပြန်၏။ ဆိုးဘုတ်ကလေးမှာ “အက်ဗက် မွန့်ခ်” ပြတိုက်သို့ ဟူ၍ ရေးထား၏။ ကျနော် ၀မ်းသာသွားရသည်။ ကျနော့်ကို ကယ်တင်သွားခဲ့သော မဏိမေခလာဆိုင်းဘုတ်ကလေး။ ထိုဘူတာတွင် ဆင်းကာ မြေပေါ်တက်ပြီး “အက်ဗက် မွန့်ခ် ပန်းချီပြတိုက်” ရှေ့ ကျနော် လျှောက်လာခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေနပ်သွားရသည်။ ဘာမျှ အခက်အခဲမရှိတော့။ ဒီပြတိုက်ကို ကျနော်တယောက်တည်း သုံးကြိမ်မျှရောက်ခဲ့ဖူး ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော့်အိမ်ကိုတော့ ကျနော်ကောင်းကောင်းကားစီးပြီး ပြန်လို့ရနိုင်သည်။ နာရီကိုကြည့်တော့ ည (၇)နာရီ ရှိနေပြီ။ အိမ်က စထွက်တုန်းက ညနေ (၄) နာရီခွဲ။
အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ အိမ်သားအားလုံး ကျနော့်ကို စိုးရိမ်တကြီး ၀ိုင်းမေးကြ၏။ ကိုမောင်မောင်မြင့်တို့ အိမ်နှင့် ကျနော့်အိမ်က အိမ်သားများမှာ ဖုန်း တဂွမ်ဂွမ် ဆက်ကာ ကျနော့်အတွက် စိတ်ပူနေကြသည်ဟု သိရ၏။ ကျနော်က အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ကိုမောင်မောင်မြင့်ထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ကိုမောင်မောင် မြင့်က လမ်းခရီးကို အသေအချာ ရှင်းပြ၏။ စိတ်မကျေမချမ်းနှင့်ပင် ကိုမောင်မောင်မြင့်တို့အိမ်ကို ဒုတိယအကြိမ် ကျနော် ချီတက်ရပြန်သည်။ ကိုမောင်မောင်မြင့်တို့အိမ်ခန်း တံခါး လူခေါ်ခေါင်းလောင်းခလုတ်ကို နှိပ်သောအခါ ည (၉)နာရီ ရှိချေတော့၏။ ကိုမောင်မောင်မြင့်၊ ဒေါ်ပေါက်နှင့် ကလေး (၂) ယောက်က အပေါက်ဝတွင် အပြုံးကိုယ်စီနှင့် ဆီးကြို ကြလေသည်။
ယမန်နေ့က အတွေ့အကြုံကို နိဂုံးချုပ်သောအခါ ဒီဗွီဘီအဖွဲ့ဝင်အားလုံးက မောင်မောင်မြင့်ပြောခဲ့သော စကားကို သဘောပေါက်လက်ခံသွားကြ၏။ ကမ္ဘာကြီးလုံးသိအကြောင်း ကျနော်၏ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကို ၀ိုင်းဝန်း အသိအမှတ်ပြုကြ၏။ နဂိုကတည်းက ခပ်ပျော်ပျော်နေတတ်သူ ကိုမောင်မောင်မြင့်အဖို့မူ ကျနော့်အပေါ် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း နောက်ပြောင်စရာ အချက်ကောင်းတချက် လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိလိုက်သည့်ဟန်ဖြင့် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေတော့၏။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 5:10 AM 1 comment:
၁၉၉၅-ခု ဇွန်လကစပြီး ၁၉၉၇-ခု အောက်တိုဘာလအထိ ကျနော် ... နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ နော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ ပါတ်သက်ရင် ... ကမ္ဘာ့မြောက်ဝန်ရိုးစွန်းနဲ့ အနီးဆုံး တိုင်းပြည်တခုဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ၊ “အော်သံ” ပန်းချီကားကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိစ္စ၊ “အကယ်၍သာ ကျမဟာ နိုင်ငံပြင်ပကို လွတ်လပ်စွာ ထွက်ခွင့်ရပြီဆိုရင် ကျမ ပထမဦးဆုံးသွားဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ နိုင်ငံကတော့ နော်ဝေးနိုင်ငံပါပဲ” လို့ ပြောရတဲ့အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အလေးအနက်ထားတဲ့နိုင်ငံ ... အဲဒီနိုင်ငံမှာ ကျနော် တော်လှန်ရေးတာဝန်နဲ့ (၂) နှစ် ကျော် နေခဲ့ရဖူး ပါတယ်။
“ဥရောပမဲဇာ” ကဗျာရှည်ဟာ အဲဒီ နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခဲ့စဉ်က ကျနော့်ရဲ့ ရင်ခုန်သံများကို စုစည်းဖော်ပြဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပါပဲ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်ပြီး ပန်းချီဆရာ “စစ်ငြိမ်းအေး” တို့ ရဲဘော်တစု စုစည်းထုတ်ဝေတဲ့ “ပန်းစကား” စာစောင်မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၂၀၀၃-ခု နိုဝင်ဘာလထဲမှာ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာနဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အခု ... ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများအတွက် ပြန်လည်တူးဖော် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
“အက်ဗက်မွန့်ခ်” 1 ရဲ့ “အော်သံ” ဘယ်မှာလဲ။
အို “ဗိုက်ကင်း” တို့
“ဟန်းနရစ် ၀ါဂီလန်း”2ကို အလေးပြုဘို့
“နော်ဒေးဂရစ်”3ကို ဦးညွှတ်ဘို့
သင်တို့ရဲ့ “တိုက်ပွဲဝင်ဖခင်” နဲ့
“ဗစ်ကို ဟန်းစတင်း”4ဂုဏ်ပြုပွဲ
“အာရှလွတ်မြောက်ဒေသ” က တဆင့်
ဗုံမဟုတ်တဲ့ ဗုံတလုံးရဲ့ ဗုံသံတွေ” ထည့်လာ
“သံလွင်ငှက်” မှသည် “သံလွင်ခက်” ဆီသို့
ကဗျာဆရာ တိုက်မောင်းရဲ့ “ရိုကျိုးမှု” တွေ ထည့်လာ
၀ံပုလွေလာဆင်ရဲ့ လေချဉ်တက်သံ ချန်မထားခဲ့မိ
တစတစ နယ်ချဲ့လာနေတဲ့ နှင်းတောင်တွေ
ဂျုံခင်း၊ အာလူးခင်း၊ မြက်ခင်း
“အော်စလို” ရဲ့ ငှက်ငယ်များကတော့
“ဗီဂီလန်း”5ပန်းခြံထဲက
အခု- အနှစ်၊ ၇၀ ကျော်
ဘယ်သူဟစ်လိုက်တဲ့ “အော်သံ” လည်း
“တဂိုး” ရဲ့ “ကောင်းကင်ကုတ်ခြစ်တဲ့လက်တွေ” မှန်းဆ
“ဇော်ဝင်းထွဋ်” ရဲ့ “ထစ်ချုန်းမိုး” ကို တမ်းတ
“ညကြီး မင်းကြီး ထပြီးထိုင်နေ” ကို မှန်းဆ
အိုးအိမ် မြေယာနဲ့ မြစ်ချောင်းများ
လက်ဖ၀ါးပေါ်က “ကဗျာ” တဲ့၊
ရက်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်
“စိန့် အိုလပ်စ်ပလစ်စ်” လမ်းကြားထဲ
တချို့ လှောင်မရတဲ့ ငှက်တွေလား
ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ “မဲဇာ” ဖြစ်ခဲ့ ၊
နှင်းတွေကိုတော့ ကျွန်ုပ် ချစ်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး
“မင်းလက်ဝဲ သုန္တရ” က
“ရောင်ဝါမထွန်း ချမ်းရှာလွန်း” တဲ့၊
“ရောင်ဝါမပွင့်၊ ချမ်းပုံဆင့်” ခဲ့။
အို မိတ်ဆွေ “ဗိုက်ကင်း” ကြီးရဲ့
“ဟောဒေါ့” နဲ့ “ဟမ်ဘာဂါ” ကို
အို “ဆန်ဗစ်ကာ”6ရေ
သင့်ခွန်အားထဲ ကတ္တီပါလက်အိပ်စွပ်ထားတဲ့ သံလက်သီးတွေ
သင့်ရင်ခုန်သံထဲ အနုသုခုမ စက်ခလုပ်ခုံတွေ
သေဆုံးခဲ့ပြီး ဥယျာဉ်တွေ ပစ်ချ
ခမ်းခြောက်ခဲ့ပြီး စမ်းချောင်းတွေ ပစ်ချ
ဗဟုဝါဒအရေခြုံ မုသာဝါဒမြေမှုန်တွေ ပစ်ချ
“ဆိတ်ဖလူးရနံ့” တွေ ပစ်ချ ပစ်ချနဲ့
“အော်စလို” ရဲ့ ညနေခင်း
“ဂျက်ကော့ဆန်”7ရေ
ဒီဖက်က နို့နှစ်ရောင် ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ ဟိုမှာဖက်ထဲ
မိုးမလွတ်ခဲ့ဘူး” ဆိုတဲ့ စာသား
နှင်းတွေ နှင်းတွေ နှင်းတွေနဲ့အစားထိုး
နေရောင်တွေ စိုရွှဲအောင် ကျလာ
ရင်ခုန်သံတွေ ပြိုကွဲအောင် ကျလာ
ကားသံတွေ ခေါင်းမပြူရဲအောင် ကျလာ
သစ်ပင်တွေ အသက်ရှူမရအောင် ကျလာ
ကျောက်ရုပ်တွေ ကြေမွအောင် ကျလာ
လရောင်တွေ အငွေ့ပျံအောင် ကျလာ
လမ်းမတွေ ကွေ့လန်အောင် ကျလာ
ခြေသံတွေ ခြောက်ခြားအောင် ကျလာ
စိတ်ဓါတ်တွေ မှောက်မှားအောင် ကျလာ
ကျပြီးရင်း ကျလာ ...။
“အက်ဗတ်မွန့်ခ်” ရဲ့ “အော်သံ” တွေ သိမ်းထုပ်
“နော်ဒေးဂရစ်” ရဲ့ “စမ်းချောင်းထဲက ကျောက်တုံးတွေ” 8 ကို သိမ်းထုပ်
ခွေကျနေတဲ့ လရောင် အကြွင်းအကျန်လေးကို သိမ်းထုပ်
ကဗျာဆရာ “မော်” ရဲ့ အရိုးပြာကြဲ
သိမ်းထုပ် ... သိမ်းထုပ်ပြီး
ခင်ညွန့်ရီရဲ့ “နွေမျက်ရည်လက်ကျန်” နဲ့
၁။ အက်ဗတ်မွန့်ခ် - နော်ဝေးပန်းချီင်္ဆရာ
၂။ ဟန်းနရစ်ဝါဂီလန်း - နော်ဝေး အမျိုးသားစာဆိုကြီး
၃။ နော်ဒေးဂရစ် - နော်ဝေး မျိုးချစ်ကဗျာဆရာ
၄။ ဗစ်ဂိုဟန်းစတင်း - နာဇီဂျာမန်များရဲ့ ပစ်သတ်ခြင်းခံရသူ (၁၉၉၄) နော်ဝေးအမျိုးသား
၅။ ဗီဂီလန်း - နော်ဝေး ပန်းပုဆရာ
၆။ ဆန်ဗစ်ကာ - နော်ဝေးနိုင်ငံ၊ မြို့တော် အော်စလိုနှင့် မနီးမဝေးတွင်ရှိသည့် မြို့ငယ်ကလေး
၇။ ဂျက်ကော့ဆန် - နော်ဝေး ကဗျာဆရာ
၈။ “စမ်းချောင်းထဲက ကျောက်တုံးများ” - ၁၉၂၅ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော နော်ဒေးဂရစ်ရဲ့ ကဗျာစာအုပ်အမည်။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 2:13 AM3comments:
Posted by ငြိမ်းဝေ at 3:51 AM4comments:
“ငြိမ်းဝေ ရှိလားဟေ့ ငြိမ်းဝေ”
“အေး ... ရှိတယ် ဟေ့၊ ဘာကိစ္စလည်းကွ”
“ဟိုမှာ နင့်သူငယ်ချင်းလို့ပြောတယ်၊ အရက်မူးပြီး ငိုနေတယ်၊ အဲဒါလာခေါ်”
လုံခြုံရေးကင်းသမား ကရင်ရဲဘော်လေး၏နောက်မှ ကျနော်လိုက်လာခဲ့သည်။ ကျနော်နေထိုင်သည့် DVB စတူဒီယိုရှေ့ လုံခြုံရေးကင်းတဲဆီလျှောက်လာကြ၏။ မှောင်နှင့်မဲမဲတွင် ကြယ်ရိပ် ဖြိုးဖျောက်ကို အားပြုကာ ကင်းတဲဆီ ရောက်လာခဲ့၏။
“ကိုငြိမ်းလာပြီလား၊ အောင်မယ်လေး ကိုငြိမ်းရယ်၊ ကျနော် ခင်ဗျားကို စောင့်နေတာဗျ ဟီး...ဟီး...ဟီး”
“ဟ ... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ကိုသောင်းလှိုင်ရ၊ အချိန်မတော်ကြီး၊ ဒါ ခင်ဗျား မယ်ပေါထက ပြန်လာတာ မို့လား၊ ကြည့်စမ်း မှောင်နေပြီ”
“အေးပါကွာ၊ ကိုငြိမ်းရာ၊ ကျုပ် ခင်ဗျားကို ပြောစရာရှိလို့ လာတွေ့တာပါ”
“ဘာပြောစရာရှိရမှာလဲ၊ ခင်ဗျား ကလီကမာတွေလုပ်မနေနဲ့၊ အရက်မူးလာရင်အချုပ်ထဲဝင်ရမှာပဲ၊ ခင်ဗျား မူးပြီး ရုံးမပြန်တတ်တော့လို့ ကျုပ်ကို ခေါ်ခိုင်းတာမို့လား ... ဟင်း”
ကျနော်က ကိုသောင်းလှိုင်၏ ခေါင်းနားတွင်ကပ်ကာ စကားတိုးတိုးပြောပြီး ကြိမ်းမောင်းလိုက်မိ၏။
“မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ၊ ကိုငြိမ်းကြီးကလည်း၊ ကျုပ် ... ကျုပ်... ခင်ဗျားကို ပြောပြချင်လွန်းလို့၊ ခံစားရလွန်းလို့၊ ခင်ဗျားက စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာမို့လား ... ဟီးဟီး”
“ဟာ လုပ်မနေနဲ့၊ လာ ကျုပ်ပြန်လိုက်မို့မယ်၊ ရဲဘော်တို့ ဒါ ငါ့သူငယ်ချင်း ဟုတ်တယ်၊ နောက်တခါဆိုရင် မမူးစေရပါဘူး ...၊ လာဗျာ ပြန်ကြမယ်”
“မ မဟုတ်သေးဘူးကိုငြိမ်း၊ ကျုပ် ... ကျုပ်ပြောတာ ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တော့ သည်းခံပြီး နားထောင်ဗျာ၊ ခဏ ... ဆိုမှ၊ ခဏလေး”
“ကဲ ဒါဖြင့် မြန်မြန်ပြော၊ ခင်ဗျားကြီးပြောပြီးတာနဲ့ ရုံးပြန်ရမယ်နော်”
“ဒီလိုရှိတယ် ကိုငြိမ်းရ ... ”
“ဟာဗျာ၊ ပြောမှာသာပြော၊ စကားချီးတွေ၊ စကားဦးတွေ သန်းမနေတော့နဲ့၊ ညဉ့်နက်နေပြီ”
“အေးပါဗျာ၊ ဒီလိုရှိတယ် ကိုငြိမ်းရ ...၊ ခင် .. ခင်ဗျား မာနယ်ပလောကို ရောက်လာတာ ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ”
“တနှစ်ကျော်ပြီ၊ ဟာဗျာ ကိုသောင်းလှိုင်ကြီင်္းကလဲ၊ ပြောစရာရှိတာပဲ ပြောလေဗျာ၊ ဘာလို့ ကျုပ်ကို ဒါတွေ မေးနေတာလဲ”
“ဒါ - ဒါက ဒီလိုပါဗျာ၊ ကျုပ်... ကျုပ်ကိုလေ၊ ရဲဘော်တွေက ပြောတယ်ဗျ၊ ခြောက်လ ... တဲ့။ ခြောက်လ ဆိုရင် ကျုပ်တို့ အောင်ပွဲရမှာပါ၊ ပြန်လာရမှာပါတဲ့၊ အဲ ... အဲဒါ .. အခုတော့ ခြောက်...ခြောက်နှစ်ရှိပြီလေဗျာ၊ ကျုပ် ... ကျုပ်မိန်းမနဲ့ ခလေးကို လွမ်းလှပြီဗျ၊ ဟီး ... ဟီး ... ဟီး”
ကျနော်တို့ ရုံးက၊ စာဖိုးမှူးရဲဘော်ကြီး ကိုသောင်းလှိုင် ... အရက်မူးးနေသည့်အတွက် ထိုညက ရုံးကိုတွဲပြီး ပြန်လိုက်ပို့ခဲ့၏။ နောက်တနေ့ မနက် ရုံးဖက်ကို ကျနော်ရောက်တော့ ကိုသောင်းလှိုင်ကြီးက ကျနော့်ကို အတွေ့မခံပဲ ပုန်းနေခဲ့လေသည်။
“မာနယ်ပလော” တွင် ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနား။ ရှုဒေါင့်အယ်ဒီတာ (ဦး) ၀င်းခက်က စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီး စကားပြော၏။ ၁၉၉၁-ခု။ သူက လာမယ့် (၂) နှစ်အတွင်း ဒီမိုကရေစီက မုချအောင်ပွဲရမည်။ ကျနော်တို့အားလုံး အိမ်ပြန်ကြရတော့မည်ဟု လက်သီးလက်မောင်းတန်းကာ ကြွေးကြော် လေသည်။ နောင် (၂) နှစ် ကျော်သည်အထိ မည်သို့မျှမထူးခြား။ စစ်အစိုးရက နည်းနည်းမှမလှုပ်။ (ပြုတ်ဖို့ နေနေသာ) ဒီတော့ ဘဘ ဦးဝင်းခက်ကို ရဲဘော်လေးတွေက လူစုစုရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင် “အဘ ဘယ်လိုလည်း (၂) နှစ် ကျော်ပြီလေ အဘ၊ ကျနော် အခုထက်ထိ မပြန်ရသေးဘူးလား” ပေါ့။ ဒီတော့ ဆရာ ဦးဝင်းခက်က အခုလို ပြန်ပြီး အဖြေပေးလိုက်၏။
“ငါက - မင်းတို့ အားကိုးနဲ့ ပြောခဲ့တာကွ” ဟူ၏။
မဲဆောက်မှာ ကဗျာဆရာ “အောင်ဝေး” ရဲ့ “ခရမ်းပြာမြင်းရိုင်း” ကဗျာစာအုပ်ထုတ်တော့ “တနှစ်အတွင်း အာဏာသိမ်းပိုက်ရေး” ဆိုတဲ့ ကဗျာစာကြောင်းလေးကို ကျနော် ဖတ်မိသည်။ လာပဲ လာချည်သေးရဲ့လို့လည်း တွေးမိသည်။ သို့သော် ကျနော် နားလည်ပေးရပါမည်။ သူက ဒီဖက်ကို ရောက်စ။ လူတွေကလည်း “အောင်ဝေး” မှ အောင်ဝေး ။ “အောင်ဝေး” ကလည်း တော်လှန်ရေးမှ တော်လှန်ရေး။ ဒီတော့ “တနှစ်အတွင်း အာဏသိမ်း ပိုက်ရေး” ပေါ့။ ဒါမှ အခြေအနေနဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ဟာမိုနီ ဖြစ်တော့မပေါ့။ အခုတော့ ဆရာ “အောင်ဝေး” ပြည်ပကို ထွက်ခွါလာတာ (၁) နှစ် ပြည့်တော့မည်။ စစ်အစိုးရကတော့ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်။
“မာနယ်ပလော” ကို ကျနော်ရောက်စက၊ ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးခန်းမဆောင်ကြီးထဲတွင် “စာဆို တော်နေ့ အခမ်းအနား” နှင့် ကြုံရသည်။ လွတ်မြောက်တဲ့ဒေသမှာ ကျင်းပတဲ့ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏတွေဆောင်တဲ့ ဒီစာဆိုတော်နေ့ အခမ်းအနားမှာ ဆရာ “မောင်သော်က” ရဲ့ “ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ” ကဗျာကို ကျနော် ရွတ်ဆိုခွင့်ရသည်။ ကျနော့်ဘ၀အသက်တာတွင် ပထမဦးဆုံးသော ကဗျာရွတ်သည့်အတွ့အကြုံဖြစ်သည်။ ကဗျာ၏ ပထမပါဒကို ခံစားချက်အပြည့်နှင့် အော်ဟစ်ပြီးရွတ်ဆိုလိုက်သည့် ကျနော့်အသံတွင် ခန်းမဆောင် တခုလုံး ဟိန်းထွက်သွားခဲ့၏။ လူတွေအားလုံး လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်ကုန်ကြ၏။ ဓါတ်ပုံရိုက်သည့် မီးရောင်တွေ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် ဖြစ်ကုန်၏။ ထိုစဉ်က ကျနော် ပထမဆုံးရွတ်ဆိုလိုက်သည့် ကဗျာစာကြောင်းမှာ “အနှစ် နှစ်ဆယ်တဲ့လားဟေ့” ဖြစ်လေသည်။
၃ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၀၈ခု ...။
လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် misscall (၃) ကြိမ် ရှိနေသည်ကိုတွေ့လို့ ခလုပ်နှိပ်ပြီး ပြန်ခေါ်တော့ တဖက်က အမျိုးသားတယောက်က ပြန်ထူး၏။
“ဟဲလို ... အခုနက ကျနော့်ကို ခေါ်ထားသလားလို့”
“အော် ... ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ကိုငြိမ်း၊ ကျနော် ... အကူအညီတခုလိုချင်လို့”
“ခင်ဗျား RFA မှာ မောင်သော်ကရဲ့ “အနှစ် နှစ်ဆယ်တဲ့လားဟေ့” ကဗျာ ရွတ်ခဲ့ဖူးတယ်နော်”
“အဲဒီကဗျာ ကျနော် အရေးတကြီးလိုလို့ ကျနော့်ဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးပါလား”
“အော် ... ဒါလား၊ ရပါတယ်။ ကျနော် ပို့လိုက်မယ်၊ စိတ်ချ”
DVB သတင်းထောက် ကိုထက်ရာဇာထံ “အနှစ် နှစ်ဆယ်တဲ့လားဟေ့” အစချီသည့် ဆရာ မောင်သော်က၏ ကဗျာကို အီးမေးလ်နှင့် ပို့နေသော ကျနော့်လက်များ သိသိသာသာကြီးကို တုန်ရင်လျက်ရှိ လေသည်။
(တနှစ်လာလည်း လွမ်း၊ တနှစ်လာလည်း ကြေကွဲ၊ တနှစ်လာလည်း အံကြိတ်၊ တနှစ်လာလည်း လက်သီးဆုပ်နဲ့၊ ဒီနှစ်တော့ ကျနော့်နှလုံးသားတွေ အသားမာတက်နေလို့ ခတ်ပျော်ပျော်ပဲ ဒီလိုစာမျိုး ရေးလိုက်ရပါတယ်။ နားလည် ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်...)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 8:04 PM 1 comment:
Posted by ငြိမ်းဝေ at 12:39 AM3comments: